Fepetra sy fepetra | Fifamoivoizana hiara-miasa
Ity manaraka ity dia mamaritra ny fepetra momba ny fampiasa amin'ny serivisy ho an'ny tranokalaniko fifamoivoizana.
MBA VAKIO TSARA IZAO DOKUMENTA INDRINDRA ALAELAN'NY FIDIANANA NA MAMPIASA NY WEBSITE. AMIN'NY FANORENANA NA FAMPIASANA NY WEBSITE ANTSIKA, MANAIKY ANAO HATAON'NY FITENY SY NY FITIAVANA IZAO ETO ALOHA. RAHA TSY METY TAMIN'NY FETY SY NY TOETRA IREO IANAO dia TSY AZONAO ATAO IZAO NA Hampiasa ny tranokalanay. RAHA TSY AZO AZO ATAO NY DIDINY SY NY FOMBA AZAFADY AZA ATAO, AZA MAMPIASA NY WEBSITE WE. Azontsika atao ny manova an'ity fifanarahana ity amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana manokana, fampahalalana manokana ho anao, ary ny fanovana tahaka izao dia ho vokany eo am-panaovana ny fifanarahana novaina amin'ny tranokalanay. Mifanaraka aminao izahay hijerena ny fifanarahana mandritra ny fotoana mahamety azy mba ho mailo amin'ny fanovana tahaka izany sy ny tohiny na ny fampiasana ny tranokala eto aminay aorian'ilay fampandrenesana toy izany dia hatao fa ny fanekenao ny fifanarahana efa novaina, tafiditra ao anatin'izany ny fanovana rehetra, fanovana hafa.
09/23/2021 11:40 hariva GMT
Ny tranokalanay sy ny votoatiny dia omena amin'ny fototra 'toy ny' tsy misy antoka amin'ny karazana rehetra. Ny tranokalanay sy ny mpamatsy azy, hatrany am-potony indrindra nomen'ny lalàna, dia manazava ny antoka rehetra, tafiditra ao (FA TSY voafetra TO) NY fiantohana ny MERCHANTABILITY, TSY-INFRINGement ny zon'ny antoko antoko fahatelo, ary ny antoko FIARAHANAM-PANJAKANA. Ny tranokalanay sy ny mpamatsy azy dia tsy manome toky momba ny fahamarinana, ny fahazoana antoka, ny fahafenoana, na ny fotoan'ny votoatiny, ny serivisy, ny TEXT SOFTWARE, ny GRAPHICS, ary ny LINK.
Amin'ny fampiasana an'ity tranokala ity, manaiky ianao fa hankatò ireo fepetra momba ny serivisy sy fepetra amin'ny fampiasana ity. Azafady vakio tsara ireo.
Ny tranokalan'ny My Traffic Blog (sy tranokala "anatiny" hafa miainga avy aminy, toy ny tranokalan'ny mpikambana manokana na tranokala mifandraika amin'ny tranokala na weblog) dia serivisy fampahalalana an-tserasera (ary, tsindraindray, ivelan'ny Internet) ary miankina amin'ny fanajana anao ny fepetra sy fepetra voalaza etsy ambany (ny faritra sy ny antoko rehetra antsoina hoe tranokalanay).
Izay politika, fampandrenesana hafa, na pejy ara-dalàna / ara-pitantanana hafa ao amin'ny tranonkalantsika dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'ireto Fepetran'ny Serivisy sy ny Fampiasana ireto. Mety tafiditra ao anatin'izany, tsy misy fetra, ny Politikan'ny DMCA, politika fiarovana fiainan'olona, Fialana andraikitra, Fanamarihana momba ny zon'ny mpamorona, Politika fanoherana ny spam, ary Fanarahan-dalàna FTC Policy.
Manaiky ianao hanaraka ny lalàna sy lalàna mifandraika amin'ny fampiasana ny tranokalan'ny My Traffic Blog sy ny atiny sy fitaovana omena ao.
Ny tranonkalantsika dia orinasa mahaleo tena, irery izay tsy misy fifandraisana, fifandraisana, na fifandraisana amin'inona na amin'inona orinasa, olona, ​​akanjo, fikambanana, na vondrona voalaza eto, na dia miseho amin'ny anaran'ny tranonkalantsika, domain, URL, na raha tsy izany. Tsy tokony hanana antoko hafa ianao, amin'ny fanonona fotsiny ny anarany, nanohana izay zavatra hitanao eto. Ny tanjona dia ny hanomezana loharanom-pahalalana mahasoa ho an'ireo mpamaky, izay ny sasany azontsika omena onitra. Tokony hihevitra fotsiny ianao amin'ny fotoana rehetra fa omena onitra isika ary, na dia mety tsy hanosika antsika hanao tolo-kevitra ratsy aza izany dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra ara-bola anao manokana ianao, na ny fampiasam-bola, ny fividianana, ny fanomezana, na amin'ny fomba hafa.
1. Fandikana, fahazoan-dàlana sy hevitra / fanapahana mpampiasa.
Ity manaraka ity dia mamaritra ny Copyright copyright ho an'ny tranokalantsika.
Ny atin'ny tranokalanay manontolo dia arovan'ny lalàna mifehy ny fananana ara-tsaina, ao anatin'izany ny lalàna mifehy ny zon'ny mpamorona sy ny marika iraisam-pirenena. Ny tompon'ny zon'ny mpamorona sy / na ny mari-barotra dia ny tranokalanay, ary / na ny fahazoan-dàlana fahatelo na orinasa hafa mifandraika amin'izany.
Tsy manan-jo hanana lahatsoratra, boky, ebook, antontan-taratasy, lahatsoratra bilaogy, rindrambaiko, fampiharana, add-on, plugin, kanto, sary, sary, sary, horonan-tsary, webinar, fandraisam-peo na fitaovana hafa nojerena na nohenoina tamin'ny avy amin'ny tranokalan'ny My Traffic Blog na amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny atiny voaaro amin'ny tranokalan'ny mpikambana. Ny fandefasana angon-drakitra ao amin'ny tranokalanay, toy ny fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy, dia tsy manova an'io zava-misy io ary tsy manome anao zon'ny data. Averinao ny zon'ny atiny anao raha vao tafiditra ao amin'ny tranokalanay izany.
TSY AZONAO ATAO HANOVANA, MIASA, MANAO LALANA, REPUBLISH, MAMPANDROSOANA, POST, TRANSMIT, NA MANDEHA AMIN'NY FOMBA FOMBA IZAO, NY LOHATENY AMIN'NY WEBSITE ANTSIKA, ANAY TEXT, GRAPHICS, CODE SY / NA SOFTWARE. Tsy maintsy mitazona ny zon'ny mpamorona sy ny fanamarihana ara-dalàna rehetra ao anaty atiny tany am-boalohany tamin'ny kopia nataonao tamin'ny atiny ianao. Tsy azonao atao ny mivarotra na manova ny atiny na mamerina, mampiseho, manao ampahibemaso, mizara, na amin'ny fomba hafa, amin'ny fomba rehetra na amin'ny lafiny ara-barotra na ara-barotra. Voarara ny fampiasana atiny voaloa amin'ny tranokala hafa na amin'ny tontolon'ny solosaina tambajotra na inona na inona tanjona. Raha manitsakitsaka ny iray amin'ireo fepetra na fepetra ianao dia mijanona ho azy ny fahazoan-dàlana hampiasa ny atiny ary tsy maintsy manimba avy hatrany izay kopia nataonao momba ny atiny ianao.
Nomena fahazoan-dàlana tsy misy, tsy azo adika, azo esorina ianao hampiasa ny tranokalanay noho ny antony manokana, manokana, tsy ara-barotra. Azonao atao ny manonta sy misintona ny ampahan'ny fitaovana avy amin'ny faritra samihafa amin'ny tranokala fotsiny ho an'ny fampiasanao tsy ara-barotra anao, raha toa ka manaiky ianao fa tsy hanova ny atiny amin'ny endriny voalohany. Ankoatr'izay, manaiky ianao fa tsy hanova na hamafa ny zon'ny mpamorona na ny fanamarihana ara-pananana avy amin'ireo fitaovana fanontana na alainao. Mariho ihany koa fa ny fampandrenesana amin'ny ampahany amin'ny tranonkalantsika izay mandrara ny fanontana sy ny fisintomana dia manambina ny fanambarana sy ny fanaraha-maso rehetra teo aloha.
Amin'ny maha mpampiasa anao, manaiky ianao hampiasa ny vokatra sy serivisy atolotry ny tranonkalantsika amin'ny fomba mifanaraka amin'ny lalàna sy lalàna mifehy ny eo an-toerana, fanjakana ary federaly. Tsy misy fitaovana hotehirizina na ampitaina izay manitsakitsaka na manitsakitsaka ny zon'ny hafa, izay tsy ara-dalàna, vetaveta, maloto, maloto na maharikoriko, fandrahonana, fanalam-baraka, na fanararaotana ny zon'ny tsiambaratelo na zon'ny fanaovana dokambarotra.
Ny tranonkalako My Traffic Blog dia mandrara ny fitondran-tena mety hamorona heloka bevava, miteraka andraikitra ara-panjakana na mandika lalàna. Ny hetsika rehetra izay mametra na manakana ny mpampiasa hafa tsy hampiasa ny serivisy ao amin'ny tranonkalantsika dia voarara ihany koa. Raha tsy avelan'ny fifanarahana an-tsoratra ianao dia tsy azonao atao ny mandefa na mandefa doka na fangatahana varotra amin'ny tranokalanay.
Manaiky ianao hanome alalana amin'ny tranokalanay fahazoan-dàlana tsy miankina, tsy misy mpanjaka, manerantany, tsy azo soloina, fahazoan-dàlana maharitra, miaraka amin'ny zon'ny fahazoan-dàlana ambany, hamerina, hizara, handefa, hamorona sanganasa derivative an'ny, aseho ampahibemaso ary hanao zavatra ampahibemaso. ary fampahalalana hafa (ao anatin'izany, tsy misy fetrany, ny hevitra ao anatiny ho an'ny vokatra sy serivisy vaovao na nohatsaraina) alefanao amin'ny faritra ampahibemaso ao amin'ny tranonkalantsika (toy ny bulletin boards, forums, bilaogy ary newsgroup) na amin'ny mailaka amin'ny tranokalanay amin'ny fomba rehetra ary amin'ny haino aman-jery rehetra fantatra ankehitriny na aorinan'ny ho avy. Omenao ihany koa ny tranokalanay hampiasa ny anaranao mifandraika amin'ireo fitaovana natolotra sy ny fampahalalana hafa ary koa mifandraika amin'ny dokam-barotra, marketing ary fampiroboroboana mifandraika amin'izany. Manaiky ianao fa tsy hanana vahaolana amin'ny tranokalanay ianao raha misy fanitsakitsahana na fanararaotana tsy ara-dalàna ny zon'ny fananana rehetra amin'ny fifandraisanao amin'ny tranokalanay.
Ny famoahana, ny vokatra, ny atiny na serivisy voalaza etoana na amin'ny tranokalanay no mari-pamantarana manokana na servicemark an'ny tranokalan My Traffic Blog na antoko mifandraika amin'izany. Ny anaran'ny vokatra sy ny orinasa hafa voalaza ao amin'ny tranonkalantsika dia mety ho mari-pamantarana an'ny tompony avy.
Rohy mankany amin'ny tranokalanay
Azonao atao ny manome rohy mankany amin'ny tranonkalantsika, raha tsy manova, manaisotra, na manafina ny fampandrenesana momba ny zon'ny mpamorona ianao na ireo fanamarihana hafa ao amin'ny tranokalanay. Ny tranonkalanao na ny loharanom-pifandraisana hafa dia tsy tokony hiditra amin'ny hetsika tsy ara-dalàna na mamoa fady. Ary farany, azonao atao ny mampifandray raha takatrao fa tsy tokony hampitsahatra ny rohy mankany amin'ny tranonkalanay avy hatrany ianao rehefa mangataka ny tranonkalantsika.
2. Fampiasana ny tranokalanay.
Manaiky ianao, manaiky ary manaiky fa tsy matihanina izahay ka tsy manome torohevitra matihanina na manam-pahaizana amin'ny sehatra iray.
Ny angona voarakitra ao na namboarina tamin'ny alàlan'ny tranokalan My Traffic Blog dia tsy natao ho torohevitra ara-dalàna. Ny tranonkalantsika, sy ny fampiasanao azy, dia tsy mamorona fifandraisan'ny mpisolovava sy ny mpanjifa. Izahay dia tsy manome antoka na manome toky ny maha-marina, ampy, na fahazarana ny angon-drakitra voarakitra ao na mifandray amin'ny tranonkalantsika.
Ny angona voarakitra ao na namboarina tamin'ny alàlan'ny tranokalanay dia tsy natao hatao, ary tsy misy, torohevitra momba ny fitsaboana na fahasalamana. Ny tranonkalantsika, sy ny fampiasanao azy, dia tsy mamorona fifandraisana amin'ny marary sy ny marary. Izahay dia tsy manome toky na manome toky ny maha-marina, ampy, na fahazarana ny angon-drakitra voarakitra ao na mifandray amin'ny tranonkalantsika.
Ny angona voarakitra amin'ny na natao azo alaina ao amin'ny tranokalanay dia tsy natao hananana, ary tsy misy, torohevitra ara-bola / fampiasam-bola. Ny tranonkalantsika, sy ny fampiasanao azy, dia tsy mamorona fifandraisan'ny mpanolo-tsaina sy ny mpanjifa. Izahay dia tsy manome toky na manome toky ny maha-marina, ampy, na fahazarana ny angon-drakitra voarakitra ao na mifandray amin'ny tranonkalantsika.
Mety hampidi-doza anao ny fampiasanao ny tranokalan'ny My Traffic Blog na ny fitaovana mifandraika amin'ny tranokalanay. Tsy tokony hihetsika na miankina amin'ny angona rehetra ato amin'ny tranonkalantsika ianao, raha azo ampiharina, raha tsy mitady ny torohevitry ny mpisolovava mahay manana fahazoan-dàlana hiasa ao amin'ny faritra misy anao momba ny olana manokana momba ny lalàna. Tsy tokony hihetsika na miankina amin'ny angona rehetra ao amin'ny tranonkalantsika ianao, raha azo ampiharina, raha tsy mitady ny torohevitry ny dokotera mahay manana fahazoan-dàlana hiasa amin'ny faritra misy anao momba ny olana ara-pitsaboana anao manokana. Tsy tokony hihetsika na miankina amin'ny angona rehetra ao amin'ny tranonkalantsika ianao, raha azo ampiharina, raha tsy mitady ny torohevitry ny mpanolotsaina ara-bola manam-pahefana manana fahazoan-dàlana hiasa ao amin'ny faritra misy anao noho ny filanao manokana ara-bola sy olana.
Azontsika atao ny manova ny endri-javatra, ny fiasa na ny atin'ny tranonkalantsika amin'ny fotoana rehetra. Izahay dia mitahiry ny zonay amin'ny fahefanay irery hanitsy na hamafana izay angona miseho eto amin'ny tranonkalantsika.
Ny adidinao amin'ireo mpampiasa hafa
Ny fampiasanao ny tranokalanay dia ho tombontsoanao manokana, tsy ara-barotra. Tsy misy mihitsy fampiasanao ny tranonkalantsika amin'ny fomba fitrandrahana harena ankibon'ny tany ho an'ny mombamomba ny hafa, na amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy na amin'ny fomba hafa, ho fampiasanao manokana na hahasoa ny hafa. Anisan'izany, fa tsy ferana amin'ny, spam (mailaka ara-barotra tsy ampoizina).
Raha mahazo fampahalalana manokana momba ny mpampiasa hafa ianao dia tsy tokony hizara izany amin'ny olon-kafa.
Voafetra ny fidirana amin'ny faritra sasany amin'ny tranokalan'ny My Traffic Blog. Izahay dia manan-jo hametra ny fidirana amin'ireo faritra hafa ao amin'ny tranokalanay, na amin'ny tranokalanay iray manontolo, araka ny fahendrenay.
Raha manome ID mpampiasa (solonanarana) sy teny miafina aminao izahay hahafahanao miditra amin'ireo faritra voafetra amin'ny tranokalanay na atiny na serivisy hafa dia tsy maintsy ataonao antoka fa tsiambaratelo ny ID sy ny teny miafin'ny mpampiasa. Mety tsy hizara ny ID ny mpampiasa anao sy / na ny tenimiafinao amin'ny olona ianao na inona na inona antony, na mivantana na ankolaka. Manaiky ny andraikitra amin'ny hetsika rehetra mitranga eo ambanin'ny ID mpampiasa na teny miafinao ianao.
Azonay atao ny manafoana ny karapanondro sy ny teny miafinao amin'ny fahefanay irery na raha mandika ny iray amin'ireo politika na teny mifehy ny fampiasanao ny tranokalan'ny My Traffic Blog na adidy fifanarahana hafa adidinao aminay ianao.
Vokatra / serivisy fahatelo an'ny antoko
Fantatrao fa, ankoatry ny fampahalalana, vokatra na serivisy voafaritra mazava fa natolotry ny tranokalanay, ny tranonkalantsika dia tsy miasa, mifehy na manohana vaovao, vokatra na serivisy amin'ny Internet amin'ny fomba rehetra. Afa-tsy ireo fampahalalana nofaritan'ny tranonkalantsika toy izany, ny fampahalalana rehetra, ny vokatra ary ny serivisy atolotra amin'ny alàlan'ny tranokalanay na amin'ny Internet amin'ny ankapobeny dia atolotry ny antoko fahatelo izay tsy mifandraika amin'ny tranonkalantsika, ary mety hahazo onitra izahay.
Fantatrao ihany koa fa ny tranonkalako My Traffic Blog dia tsy afaka miantoka na tsy manome antoka fa tsy misy areti-mifindra na virosy, kankana, soavaly Trojan na kaody hafa izay mampiseho toetra manimba na manimba ny tranokalan'ny My Traffic Blog. Tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny fomba fiasa sy ny fizahana ampy ianao hanomezana fahafaham-po ireo zavatra takinao manokana momba ny fahamarinan'ny fampidirana sy ny fivoahan'ny angon-drakitra, ary ny fitazonana fitaovana ivelany amin'ny tranokalanay ho an'ny fananganana tahirin-kevitra very.
Ny fiheverana ny risika
MANOMBINA NY ANDRAIKITRA TANORA ANDRAIKITRA AMIN'NY Fampiasanao ny tranokalanay sy ny Internet. Ny tranokalanay dia manome ny WEBSITE WEBS sy ny fampahalalana mifandraika "AS IS" ary TSY METY HAHAZOANA FANAMPINY, na solon-tena, na solontena na fanamafisana na inona na inona (TSY MISY FAMPIANARANA LIMITATION OF TITLE NA FARITAN'NY FANORANANA MOMBA NY vokatra na serivisy, na inona na inona fampahalalana na serivisy omena amin'ny alàlan'ny serivisy na amin'ny Internet amin'ny ankapobeny, ary ny tranokalanay dia tsy tokony horaisina amin'ny vidim-piainana na fahasimbana miseho mivantana na tsy misy fotony. IRAY IHANY NO ANDRAIKITRA AZONAO HANOMPOANA NY FAHASALAMANA, FAHAMARINANA SY FAHAMARINANA NY HEVITRA REHETRA, torohevitra, serivisy, serivisy ary famoahana vaovao hafa nomena amin'ny alàlan'ny serivisy na amin'ny INTERNET amin'ny ankapobeny. Ny WEBSITE WEB dia TSY manome toky fa TSY HANASITRATRA NA TSY MAIMAIM-POANA ny serivisy NA HATRATRA NY lesoka ao amin'ny serivisy.
AZO ATAO ATAO ATAO IZAO FA NY ZAVATRA MAITSIN'NY INTERNET dia MISY ZAVATRA TSY MISY FITORIANA EO AMIN'NY MPAMORITRA AMIN'NY SADY SA MBA HANAHOTRA ANAO. NY ACCESS-nao amin'ireto fitaovana ireto dia eo am-pelatananao. Ny tranokalanay dia tsy misy fifehezana ary tsy mandray andraikitra na inona na inona ho an'ireo fitaovana toy izany.
Mahasakana ny andraikitra
Ny atiny dia mety misy tsy fahatomombanana na hadisoan-tsoratra. Ny tranokalan'ny My Traffic Blog dia tsy milaza momba ny maha-marina, azo itokisana, fahafenoana, na fahatanterahan'ny atiny na momba ny valiny azo avy amin'ny fampiasana ny tranokalanay na ny atiny ao aminy. Tandindomin-doza ny fampiasana ny tranokalanay sy ny atiny. Ny fanovana dia atao tsindraindray amin'ny tranokalanay, ary azo atao amin'ny fotoana rehetra.
NY WEBSITE-TSIKA dia TSY manome toky fa ny WEBSITE-WE dia hiasa tsy misy diso na koa ny WEBSITE sy ny serivisiny dia maimaim-poana amin'ireo virosy KOMPUTER sy ireo entana hafa manimba na fepetra hafa. RAHA NY Fampiasanao ny tranokalanay na ny vokatra aterak'izany dia ilaina amin'ny serivisy na fanoloana fitaovana na daty, dia tsy tompon'andraikitra amin'ireo tranokala ireo ny tranokalanay.
Fandavana ny fahavoazana vokatr'izany
TSY MISY ATAON'NY WEBSITE-nay, ireo mpamatsy azy, na antoko fahatelo izay voalaza ao amin'ny tranokalanay ho azo ekena (I) TSY MISY INDRINDRA, CONSEQUENTIAL, INDIRECT NA RAHARAHANA hafa (tafiditra ao, fa tsy voafetra amin'ny, fahasimbana noho ny fahaverezan'ny PROFITR, FAMONJY FANDROSOANA NA FAMPahalalana, sy ny toa azy) NOHO AMIN'NY FAMPIASANANA NA TSY FAHASALAMANA Hampiasa ny serivisy, NA INFORMATION INDRINDRA, NA TRANSACTIONS natolotra tamin'ny serivisy, NA sintomina avy amin'ny serivisy, NA ny fanemorana ny fampahalalana toy izany na ny serivisy. NA dia ny WEBSITE-ntsika aza, na ny solontenan'izy ireo dia efa nanoro hevitra momba ny mety hisian'ny fahasimbana sahala amin'izany, na (II) misy fitarainana mahasarika ny lesoka, ny fisokafana, na ny tsy fanajana hafa ao amin'ny serivisy sy / na ny fampidinana ny serivisy.
SATRIA NY fanjakana sasany dia tsy mamela ny fanakatonana na famerana ny fitakiana andraikitra noho ny fahasimbana mihoa-pampana na amin'ny kisendrasendra, NY fetra etsy ambony dia mety tsy hihatra aminao. EO AMIN'NY FITONDRANA TOA IZANY, NY FAHAMARINANA dia voafetra amin'ny fihoaram-pefy lehibe indrindra nahazoana alalana tamin'ny lalàna, vokatr'izany amin'ny volavolan-dalàna madinidinika kely indrindra nahazoana alalana ho an'ny roa tonta WEBSITE sy ireo mpiray antoko hifandray amin'ntsika mifandray. IZAO dia eo amin'ny toeran'ny misy fanafody hafa rehetra azo atao.
Rohy mankamin'ny tranonkala hafa.
Ny tranonkalantsika dia misy rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Ny tranokalan'ny My Traffic Blog dia tsy misy fanehoana na inona na inona momba ny tranokala hafa azonao idirana amin'ny alàlan'ity iray ity na izay mety mampifandray ity tranonkala ity. Rehefa miditra amin'ny tranokalanay ianao, azafady azafady fa tsy miankina amin'ny tranokalanay izy io, ary tsy voafehin'ny tranonkalantsika ny atiny ao amin'io tranonkala io. Ireo rohy ireo dia omena fotsiny ho fanamorana anao fa tsy ho fanamafisana avy amin'ny tranonkalantsika momba ny atiny ao amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Ny tranonkalantsika dia tsy tompon'andraikitra amin'ny atin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo mifandray ary tsy manao solontena momba ny atiny na ny marim-pototra amin'ny tranokala fahatelo toy izany. Raha manapa-kevitra ny hiditra amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo mifandray ianao dia mety hanao izany amin'ny loza mety hitranga. Tsy voatery manohana, mamporisika, manome sosokevitra isika raha tsy izany, na hanao zavatra haingana na hanaingana momba ny vokatra na serivisy natolotra. Tokony hieritreritra ianao fa mahazo onitra amin'ny fividianana rehetra ataonay izahay. Averiko indray, ny fangatahana fidiram-bola rehetra dia tokony hoheverina ho valiny tsy mitombina ary mihevitra ianao fa mety hitranga ny valiny ambany, ao anatin'izany ny fatiantoka, izay tsy andraikitray na tompon'andraikitra.
Amin'ny maha mpampiasa anao ny tranokalan'ny My Traffic Blog, tompon'andraikitra amin'ny fifandraisanao manokana ianao ary tompon'andraikitra amin'ny vokatry ny fandefasana azy ireo. Tsy tokony hanao ireto zavatra manaraka ireto ianao: mandefasa fitaovana misy zon'ny mpamorona, raha tsy hoe ianao no tompon'ny zon'ny mpamorona na mahazo alalana avy amin'ny tompona zon'ny mpamorona hametraka azy; mandefasa fitaovana izay manambara ny tsiambaratelon'ny varotra, raha tsy hoe tomponao izy ireo na mahazo alalana avy amin'ny tompony; lahatsoratra apetraka izay manimba ny zon'ny fananana ara-tsaina hafa an'ny hafa na ny momba ny tsiambaratelo na ny zon'ny dokambarotra an'ny hafa; lahatsoratra ara-nofo izay vetaveta, maloto, manala baraka, mandrahona, manenjika, manararaotra, mankahala, na mahamenatra ny mpampiasa hafa amin'ny tranonkalantsika na olon-kafa na entity hafa; mandefasa sary mamoa fady; mandefa doka na fangatahana orinasa; mametaka litera rojo na drafitra piramida; na maka tahaka olona hafa.
Ny tranonkalantsika dia tsy maneho na manome toky ny maha-marina, marina, na azo itokisana izay fifandraisana navoakan'ny mpampiasa hafa ny tranonkalantsika na manohana izay hevitra rehetra asongadin'ireo mpampiasa ny tranonkalantsika. Manaiky ianao fa ny fiankinan-doha amin'ny fitaovana navoakan'ny mpampiasa hafa ny tranokalanay dia mety hitanao fa mety.
Ny tranokalan'ny fifamoivoizako dia tsy voatery hijerena mialoha ny fifandraisana ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fizahana na fanaraha-maso ireo fitaovana napetrak'ireo mpampiasa tranokalanay. Raha voamarin'ny tranokalanay sy / na nampandrenesin'ny mpampiasa fifandraisana izay voalaza fa tsy mifanaraka amin'ity fifanarahana ity, ny tranokalanay dia mety hanadihady momba izany fiampangana izany ary hamaritra amin'ny fahatokiana sy ny fahalalany irery raha hanaisotra na hangataka ny fanesorana ilay fifandraisana. Ny tranokalanay dia tsy manana andraikitra na andraikitra amin'ny mpampiasa ny tranokalanay amin'ny fahombiazana na tsy fanatanterahana asa toy izany. Manana ny zony handroaka ireo mpampiasa ny tranonkalantsika ny tranonkalantsika ary manakana ny fidirana an-tsokosoko mankany amin'ny tranonkalantsika noho ny fanitsakitsahana io fifanarahana na lalàna na lalàna io, ary manana ny zon'ny hanala ireo fifandraisana izay manararaotra, tsy ara-dalàna na manakorontana.
Fampitandremana amin'ny haino aman-jery sosialy (fisarahana amin'ny fampahalalana manokana sy tsy miankina)
Ny media sosialy dia nanome sehatra ho an'ireo mpampiasa internet hamoaka fampahalalana manokana momba azy ireo, amin'ny fomba toa tsy mampidi-doza, raha tsy mety sy antenaina. Na izany aza, mihoatra ny vitsivitsy ny olona efa niaina hanenenana ny mombamomba anao izay nozarain'izy ireo na ny hafa. Marina izany hatramin'ny ela tamin'ny mailaka tsotra. Marina tokoa izany amin'ny tranokala sosialy sy ny fampiharana ho an'ny haino aman-jery sosialy amin'ny tranokala hafa, anisan'izany ity iray ity. Nampandrenesina ianao amin'ny famoahana vaovao tsy am-piheverana.
Manaiky ianao handoa onitra, hiaro ary hitazona tsy maninona ny tranokalan'ny My Traffic Blog, ny mpikambana ao aminy, ny tompon'andraikitra, ny talen'ny, ny mpiasa, ny agents, ny licensorisant, ny mpamatsy ary ny mpamatsy vaovao momba ny antoko fahatelo amin'ny tranokalanay ary manohitra ny fatiantoka, ny fandaniana, ny fahasimbana ary ny vidiny. ao anatin'izany ny saram-pandresen'ny mpisolovava mety, vokatry ny fampiasana ny tranokalanay na fanitsakitsahana ity fifanarahana ity (ao anatin'izany ny fitondran-tena tsinontsinoavina na diso) avy aminao na olona hafa miditra amin'ny tranonkalantsika.
4. Ny zon'ny antoko fahatelo.
Ny fepetra voalaza ao amin'ny andalana 2 (Fampiasana ny serivisy), ary ny 3 (fanonerana) dia ho tombotsoan'ny tranonkalantsika sy ny tompony, ny tompon'andraikitra, ny talen'ny, ny mpiasa, ny maso ivoho, ny mpamatsy lisansa, ny mpamatsy ary ny mpanome fampahalalana avy amin'ny antoko fahatelo an'ny Serivisy. Ny tsirairay amin'ireny olona na fikambanana ireny dia manana ny zony hanamafy sy hampihatra ireo fepetra ireo hiampanga anao amin'ny anarany manokana.
Izahay dia manana zo hanao fanadihadiana momba ny fitarainana na voalaza fa fanitsakitsahana ireo toro-hevitra momba ny serivisy sy fepetra amin'ny fampiasana ary mandray izay fiheverana izay heverintsika fa mety, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fanaovana tatitra momba ny hetsika tsy ara-dalàna amin'ireo manampahefana, mpanara-dalàna, na antoko fahatelo hafa ary fanambaràna izay angon-drakitra ilaina na mifanaraka amin'ny olona na orin'asa mifandray amin'ny mombamomba anao, ny adiresy mailaka, ny tantaran'ny fampiasana, ny adiresy IP ary ny angon-drakotra fifamoivoizana.
Ity fifanarahana ity, na amin'ny ampahany na amin'ny ampahany, dia mety hofaranan'ny My Traffic Blog tsy misy fampandrenesana amin'ny fotoana rehetra na misy antony. Ny fepetra voalaza ao amin'ny andalana 1 (Fizakàmanana, Fahazoan-dàlana ary fanolorana hevitra), 2 (Fampiasana ny serivisy), 3 (fanonerana), 4 (zon'ny antoko fahatelo), 6 (fanofana mpisolovava / tsy misy fifandraisana amin'ny mpisolovava), ary 7 ( Miscellaneous) dia tafavoaka velona amin'ny famaranana ity fifanarahana ity, na amin'ny ampahany na amin'ny ampahany.
6. Manakarama mpanolotsaina fampiasam-bola, mpisolovava, na mpitsabo na matihanina hafa / tsy misy fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny mpifaninana na ny fahafaha-miasa.
Ny fisafidianana lozisialy, dokotera, na mpanolotsaina amin'ny fampiasam-bola dia olana lehibe ary TSY tokony hiorina amin'ny data misy ao amin'ny tranokalanay na amin'ny dokambarotra fotsiny.
Miova tsy tapaka ny lalàna ary mety tsy feno na marina ny angona arakaraka ny olanao manokana momba ny lalàna. Ny olana ara-dalàna tsirairay dia miankina amin'ny zava-misy iadidiny ary ny faritra samy hafa dia samy manana lalàna sy fitsipika samihafa. Izany no antony tokony handinihanao fatratra ny fandraisana mpanolo-tsaina manana fahazoan-dàlana sy ara-pahaizana ao amin'ny faritra misy anao.
Ny olana ara-pahasalamana dia sarotra, ary matetika dia azo avy amin'ny antony ara-organika sy ara-tsaina. Tsy tokony hampiasa tranonkala iray mihitsy ho loharanom-pahalalana aretina na fitsaboana olana ara-pahasalamana.
Ny raharaha ara-bola dia miankina amin'ny tsirairay. Ny fandeferana amin'ny risika dia singa iray tokony hodinihina alohan'ny hanaovana fampiasam-bola na fanapahan-kevitra ara-bola. Noho ireo antony ireo, ary hafa, dia tokony hijery ny fitarihan'ny matihanina voaofana fa tsy tranokala.
Azonao atao ny mandefa mailaka aminay, saingy tsy ho voatazona amin'ny fomba ahoana ny fifandraisan'ity fifandraisana ity amin'ny alàlan'ny fananganana fifandraisana mpisolovava, na fifandraisana matihanina, ka noho izany ny fifandraisana dia tsy tokony hampiditra data momba ny tsiambaratelo na saro-pady satria tsy hiseho amin'ny fifandraisanao ny tombontsoany na tsiambaratelo.
Ity fifanarahana ity dia raisina toy ny hoe tanterahina, ampiharina ary tanterahina any amin'ny State of California. Arak'izany, izy io dia ho fehezina sy hadika mifanaraka amin'ny lalàn'i California mikasika ireo izay azo ampiharina amin'ny fifanarahana, tsy misy fiheverana ny fifanolanana amin'ny fitsipiky ny lalàna.
Izay antony tokony hataonao raha ny momba ny tranokalan'ny My Traffic Blog dia tsy maintsy apetraka ao anatin'ny herintaona (1) aorian'ny nipoiran'ny antony nahatonga ny hetsika na ailikilika sy hosakanana mandrakizay izy ireo. Ny hetsika rehetra dia iharan'ny fetra voalaza ao amin'ireto fehezan-dalàna amin'ny serivisy sy ny fampiasa ireto. Ny fangatahana ara-dalàna rehetra mipoitra avy na mifandraika amin'ireo Fepetran'ny serivisy sy ny fampiasa amin'ny tranokalanay na ny tranokalanay, tsy misy fanitsakitsahana ny zon'ny fananana ara-tsaina sy ny fangatahana hafa ataonay, dia halamina am-pahatokisana amin'ny alàlan'ny fifampiraharahana mifehy arak'asa isaky ny fitsipiky ny fitsinjaram-pahefana Amerikana Arbitration Association. Ny arbitration dia hatao any California. Ny ankolafy tsirairay dia samy handray ny antsasaky ny sarany amin'ny arbitration ary ny vidiny, ary ny ankolafy tsirairay avy dia samy hitondra ny ondrany manokana. Ny fitakiana rehetra dia araraotin'ny arakaraka ny tsirairay, ary tsy ampiarahina amin'ny arbitration misy ny fangatahana na ny ady hevitra ataon'ny ankolafy hafa.
Na ny fizotran-javatra misy eo amin'ny antoko na ny fomba fiasa ara-barotra indostrialy dia tsy tokony hihetsika hanova izay fepetra rehetra amin'ity fifanarahana ity.
Ny tranokalanay dia mety manendry ny zony sy ny adidiny eo ambanin'ity Fifanarahana ity amin'ny antoko rehetra amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampilazana aminao.
Ny fiteny amin'ireto fehezan-dalàna momba ny serivisy sy fampiasa ireto dia azo adika amin'ny dikany marina fa tsy ho an'ny antoko manohitra na mifanohitra amin'izany. Ny lalàna mifehy ny fananganana ka mahatonga ny tsy mazava halamina amin'ny antoko mpamolavola (izany hoe: "contra preferentum") dia tsy mihatra amin'ny fandikana ireo fepetra momba ny serivisy sy ny fampiasa, satria ny fifanarahana dia heverina ho toy ny mpanoratra ny antoko.
Raha misy fepetra amin'ireto voambolana momba ny serivisy ireto sy ny fepetra amin'ny fampiasana dia tsy azo haverina na tsy azo atokisana, io ampahany io dia azo raisina araka izay azo atao araka izay azo atao amin'ny lalàna ary ny fahatapahan-kery dia mihatra amin'ny ampahany ambiny, mba hijanonany hatrany am-pahefana sy ampiharina.
Mandrakizay io fifanarahana io
Raha toa ka mifanipaka na mifanohitra amin'ireo fepetra momba ny serivisy sy fepetra amin'ny fampiasana ireo ireo zavatra tafiditra ao amin'ny tranokalanay sy ireo fepetra amin'ny fampiasana, ireo fepetra momba ny serivisy sy fepetra amin'ny fampiasana ity.
Ny tsy fahombiazantsika hampihatra izay fepetra omena ireo làlana momba ny serivisy sy fepetra amin'ny fampiasana ity dia tsy azo raisina ho toy ny fanilihana ny fanomezana na ny zo amin'ny fampiharana ny fanomezana.
Ny zontsika ao ambanin'ireo fepetra momba ny serivisy sy fepetra amin'ny fampiasana ity dia ho tafita velona amin'ny fampitsaharana io fifanarahana io.
Ny zon'ireo izay tsy nomena mazava tsara eto dia natokana ho an'ny My Blog Blog.
FANAMARIHANA FANOVANA: Toy ny pejy fampandrenesana momba ny fitantanan-draha sy ara-dalàna anay, ny atin'ny pejy dia afaka miova rehefa mandeha ny fotoana. Araka izany, ity pejy ity dia afaka mamaky hafa amin'ny fitsidihanao manaraka. Ilaina ireo fanovana ireo, ary tanterahan'ny My Traffic Blog, mba hiarovana anao sy ny tranonkalako My Traffic Blog. Raha zava-dehibe aminao ity pejy ity dia tokony hijerena matetika ianao satria tsy misy fampandrenesana hafa momba ny atiny voaova omena na alohan'ny na aorian'ny fiatraikany.
FAMPITANDREMANA COPYRIGHT: Ireo fanamarihana ara-dalàna sy ireo pejy fitantanan'ity tranonkala ity, anisan'izany ity iray ity, dia navoakan'ny mpisolovava iray tamim-pahazotoana. Izahay ato amin'ny My Traffic Blog dia nandoa vola mba hanomezana alalana ny fampiasana ireo fampandrenesana ara-dalàna sy pejy fitantananana ao amin'ny Blog My Traffic ireo ho fiarovana anao sy anay. Ity fitaovana ity dia mety tsy hampiasaina amin'ny antony na antony inona ary ny fampiasana tsy nahazoana alàlana dia nopetahana tamin'ny alàlan'ny Copyscape mba hahitana ireo mpandika lalàna.
FANONTANIANA / FANOMPOANA / FANAHY https://traffictoaffiliate.com